Dooxada Rift. Wax walba oo jira si loo ogaado | Saadaasha Shabakadda
Sawir laga soo qaaday NASA oo aad bidix ilaa midig wax uga arki karto harada Lake Upembe, Tanganyika (kan ugu weyn) iyo Rukwa.
El doox dillaac ah Waa biil cilmiyadeed oo weyn oo bilaabay inuu sameysto 30 milyan oo sano kahor wuxuuna ku fadhiyaa aag dhan 4830 kiiloomitir dhanka waqooyi-koonfur.
Maanta waxaa loo tixgeliyaa inay tahay sariirta aadanaha taas oo ay ugu wacan tahay tiro badan oo ka mid ah fosils hominid oo halkaas laga helay. Intaas waxaa sii dheer, Unesco waxay ku dhawaaqday harooyinka inay yihiin Goob Hidaha Adduunka ah sanadkii 2011. Laakiin, Maxaa kale oo khaas ah oo ku saabsan aaggan?
1 Halkee ka timid?
2 Juqraafigaagu waa sidee?
3 Maxay yihiin harooyinka Dooxada Weyn?
3.4 Harooyinka reer galbeedka
3.5 Harooyinka koonfureed
3.6 Harooyinka kale
Sidii aan ku sheegnay bilowgii, Rift Valley wuxuu bilaabay inuu sameysmo 30 milyan oo sano ka hor taasoo ka dhalatay kala go'idda taarikada tektikada (Soomaali, Hindi, Carab iyo Eurasian). Waqti ka dib iyo qolofka dhulka waxaa ku dhalaalay magma dhalaal badan oo kor u kacaya, jeexdin dheer ayaa laga sameeyay buuro leh jaranjo weyn.
Aagga dhagxaanta dhexe wuxuu si joogto ah u kala jajabiyaa, isagoo abuuraya cilado ay dhagxaanta dhagxaanta ku dhaqaaqaan isbadal toosan. Meelo badan ayaa baloogyadan u quusaan si ay u sameeyaan graben, taas oo ah niyad jab dheer oo ku xaddidan labada dhinac cilladaha caadiga ah ee is barbar socda
Juqraafigaagu waa sidee?
Sawir - Flickr / Charles Roffey
Dooxada Rift, oo dhacda bariga qaaradda Afrika, waxay leedahay ballaadhin dhan 4830 kilomitir. Qeybteeda bariga waxaan ka helnaa savannasyada caadiga ah ee Afrika, halka ay ku nool yihiin gisi Afrika, wildebeest, Geriga ama libaaxa; iyo galbeedka waxay soo dhaweyneysaa keymaha, kuwaas oo ah hoyga chimpanzees iyo gorillas, iyo kuwo kale.
Halkaas waxaad sidoo kale ka arki kartaa Fulkaano Kilimanjaro, oo ah buur ku taal waqooyi-galbeed ee Tansaaniya oo ay sameeyeen saddex fulkaano aan firfircooneyn (Shira oo ku taal galbeedka oo leh joog sare oo ah 3962 mitir, Maswenzi oo ku taal bariga oo cabirkeedu yahay 5149 mitir oo joog ah iyo Uhuru oo labadaba dhexda kaga jira oo jooggoodu yahay 5891,8 mitir), marka lagu daro qaar ka mid ah harooyinka biyaha macaan ee ugu waawayn qaaradda, sida Turkana, Tanganyika ama Malawi.
Iyadoo ay sabab u tahay kala go'iddii ay sameeyeen Rift Valley, bariga qaaradda cimilada ayaa ka qalalan tan galbeedka, taas oo ah sababta qaybtan ka mid ah Afrika ay savannah uga soo muuqatay markii hore, ka dibna daanyeerrada maxalliga ah ee ilaa xilligaas ku noolaa geedaha. Muddo ka dib waa inay noqdaan dhul, baranaya ku socoshada labadooda lugood ee dambe oo aan maanta u naqaano lugaha.
Tani waa aag aad u wanaagsan oo lagu barto wax badan oo ku saabsan waayihi ugu fogaa ee aadanaha, tan iyo jahawareerka weyn wuxuu kashifay boqolaal mitir oo juqraafiyeedMarka helitaanka haraaga bini-aadamka ma aha oo kaliya hawl adag, waa inay sidoo kale noqotaa mid xiiso leh
Maxay yihiin harooyinka Dooxada Weyn?
Sawir - Flickr / fabulousfabs
Harooyinka ku yaal dooxadan ayaa ah kuwa ugu qanisan noocyada kala duwanaanshaha adduunka. Ilaa hadda 800 oo nooc oo kalluunka loo yaqaan 'chichlid fish' ayaa la helay (kalluunka lafaha leh), waxaana weli jira qaar kaloo badan oo wali sugaya in la ogaado.
Laakiin sidoo kale, inkasta oo harooyinka aysan waxtar weyn u lahayn in la dhuuqo gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ay soo saaraan shidaalka, aerosols iyo kuwa kale, way sameeyaan waxaa loo baahan yahay in la yareeyo xaalufinta dhirta ku hareeraysan lana soo celiyo meelahaas la banneeyay. Kaymaha, Afrika iyo meelkasta oo meeraha ka mid ahba, waxay nuugaan gaasaska sida kaarboon laba ogsaydhka, sidaas awgeedna waxay u yareeyaan saamaynta isbeddelka cimilada.
Harada Abaya: ee 1162km2
Harada Chamo: ee 551km2
Harada Ziway: ee 485km2
Harada Shala: ee 329km2
Harada Koka: ee 250km2
Harada Langanao: ee 230km2
Harooyinka Abijatta: ee 205km2
Harada Awasa: ee 129km2
Harada Turkana: ee 6405km2
Harada Logipi: waa haro gacmeed oo ku taal dooxada Suguta
Harada Baringo: ee 130km2
Harada bogoria: ee 34km2
Harada nakuru: ee 40km2
Harada Elmenteita: balli gacmeed.
Harada Naivasha: ee 160km2
Harada Magadi: balli gacmeed oo ku yaal meel u dhow xadka ay la wadaagaan Tansaaniya.
Harada Manyara: ee 231km2
Harada Eyasi: haro xilliyeed gacmeed
Harooyinka reer galbeedka
Harada Albert: ee 5300km2
Harada Eduardo: ee 2325km2
Harada Kivu: ee 2220km2
Harada Tanganyika: ee 32000km2
Harada Rukwa: qiyaastii 560km2
Harada Malawi: ee 30000km2
Harada Malombe: ee 450km2
Harada Chilwa: ee 1750km2
Harada Moero: ee 4350km2
Harada Mweru Wantipa: ee 1500km2
Sawir - Wikimedia / Lichinga
Dooxada Rift waa meel qurux badan, oo nolol ka buuxo. Mid ka mid ah kuwa ay tahay inaad tagto ugu yaraan hal mar arag. Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay maqaalkan loogu tala galay gogosha aadanaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Dooxada Rift